Keli ahaanta waqtiga fayruska coronavirus | Mental Health Foundation
Keli ahaanta waqtiga fayruska coronavirus
Keli ahaanta ayaa ka mid ah dareennada ay malaayiin naga mid ahi yeeshaan inta uu socdo cudurka safmarka ee coronavirus ee hadda. Dadaalka aan wada jir u galnay nabad qabidda iyo badbaadinta nafta, waxaa hakad ku galay hababkii aan caadi ahaan ku arki jirnay qoyska ama qaraabada, saaxiibbada ama wajiyada aan garanayno uun.
Sidee ayay keli ahaantu u saamaysaa caafimaadkeena maskaxda?
Qaar farabadan oo naga mid ah ayaa keli ahaan kolba mar dareema lamana filayo in dareennadan waqti gaaban ay waxyeelleeyaan caafimaadkeena maskaxda. Hase yeeshee, hadba sida uu u sii dheeraado waqtiga cudurka safmarku, ayay dareennadani u sii waqti dheeraadaan.
Keli ahaanta waqti dheeri waxay kordhin kartaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, sida niyadjabka, walwalka iyo diiqada. Waxaa aad u adkaan karta in laga gudbo saamaynta ay keli ahaanta waqti dheeri u leedahay caafimaadka maskaxda.
Maxaan samayn karnaa si aan uga hortagno keli ahaanta?
Waxaan u baahan nahay in aan hagaajinno sida aan dadka ula xiriirno oo aan soo helno habab cusub oo aan waqtigan ku wada xiriirno, si aan u xafidno shabakadaha ama xiriirrada bulsheed ee adag ee naga celiya liidashada caafimaadka maskaxda.
Ku wada xiriiridda wicista fiidiyowga leh ama telefoonka, ayaa daruuri ah. Marka suurogalka ah sii wad hawlaha caadiga kuu ah – tusaale ahaan haddii aad turub saaxiibbada la ciyaarto habeen ka mid ah maalmaha la shaqeeyo, isku day in aad tan jadwalka ku hayso oo aadan ka saarin oo aad taas halkeeda ku wada ciyaartaan wicis fiidiyow leh. Ama marka suurogalka ah ku biira mid ka mid ah ciyaaraha su'aalaha ee farabadan ee internetka ee lagu qabto baraha Facebook ama Youtube, idinkoo koox ahaan uga ciyaaraya.
Haddii aadan farsamada aqoonin, wicista telefoonka ee caadiga ah, farriimaha qoraalka ama xataa qorista waraaqaha ayaa ah habab wacan oo aad qof ugu muujin karto in aad maskaxda ku hayso.
Caawinta dadka kale ee laga yaabo in ay ku jiraan keli ahaan
Waxaad la xiriiri kartaa qof keli ku nool si aad xaaladdiisa uga war hesho. Farriin qoraal ah ama wicis teleffoon ayaa waxtar weyn u yeelan karta qof aanay cidi muddo la soo xiriirin.
Haddii ay tahay deris, wax ayaabad qofkaas la wadaagi kartaa - idinkoo si nabad ah u kala fog! Haddii aad garanayso qof ay farsamada tignoloojiyeed ku adag tahay, iminka ayaa fiican in aad qofkaas u macnayso sida guriga loogu habaysto ama loogu samaysto wax la mid ah barnaamijka Skype ama Zoom. Waxay tani waxtar aad u ballaaran u keeni kartaa macaamilooyinka ama islafalgalka bulsheed ee ay mustaqbalka dadka la yeeshaan.
Adiga uun ma aha
Cidina kama badbaaddo dareenka keli ahaanta mararka qaar. Qof kaste ayaa dareemi kara in uu ka go'ay dadka ehelkiisa ah, laakiin qaar naga mid ah ayaa dadka kale kaga dheerayn kara isticmaalka farsamada, ama xiriirrada bulsheed.
Marka uu qofba qofka kale daryeelo, aan ka war helno dadka keli ahaantu ku sii badan tahay, ama aan xataa mutaddawac ku shaqayno, waxaan caawin karnaa ka hortagga safmarka keli ahaanta.
Waxa aad samaynayso haddii aad keli ahaan dareensan tahay
Isku day in aad wacdo qof aad saaxiibbo tihiin, xubin ka mid ah qoyska, xirfadle caafimaad ama lataliye si aad dareennadaada ugala hadasho.
Waxaad weliba la xiriiri kartaa hay'adda Samaritans (Samafaleyaasha), wac lambarka: 116 123 ama iimayl u dir: [email protected] haddii aad u baahan tahay qof aad la hadasho.
Waqti Nafis ah oo aad ka helayso lambarka 0800 83 85 87
Ku biir koox ama fasal internet ah oo diiradda saaraya wax aad xiisayso – waxay taasi noqon kartaa wax kaste laga bilaabo fasalka jimicsiga internetka, naadiga buugaagta iwm.
Ku fikir in aad socod gaaban ugu baxdo bannaanada dadweynaha u furan (adigoo haddana xafidaya kala fogaynta dadka).
Waqtigani waa mid caqabad leh oo mararka qaar keli ahaan laga dareemo, laakiin waa la dhaafi doonaa. Inta aan taas gaarayno, waa in aan inta suurogalka ah u naxariisanno nafteena iyo dadka kale.